ကွန်ပျူတာမှာအလုပ်လုပ်သည့်အခါမျက်စိပေါ်မှာပိုမိုလွယ်ကူ, ပင်ပန်းနွမ်းနယ်ကိုရှောင်ရှားဖို့ဘယ်လိုငါ့ကိုပြောပြပါ? - မေးခွန်းနှင့်အဖြေ - 2019
ကွန်ပျူတာနည်းပညာ၏အသက်အရွယ်နှင့်ကွန်ပျူတာမရှိဘဲ, ဒီမှာသွားနှင့်မပါဘူး, သငျသညျသူ့ကို bezvylazno များအတွက်နေတုန်းပဲထိုင်လို့မရပါဘူး - ဒီ XXI ရာစုဖြစ်ခဲ့သည်ဟူသောအချက်ကိုနေသော်လည်း။ အဖြစ်ဝေးငါသိသည်အတိုင်း, မျက်စိအထူးကုဆရာဝန်တစ်ဦးကို PC ဒါမှမဟုတ်တီဗီများအတွက်တစ်ဦးထက်ပိုနာရီတစ်ရက်ထိုင်ဖို့အကြံပေးလိုပါတယ်။ ဟုတ်ပါတယ်, ငါကိုနားလည်သူတို့ကသိပ္ပံအားဖြင့်ပဲ့ထိန်းခြင်းနှင့်ဒါပေါ်, ဒါပေမယ့်ဘယ်သူ၏အလုပ်အကိုင်ကို PC နှင့်အတူချိတ်ဆက်လူတွေအများကြီးရှိပါသည် - ။ (programmer တွေ, စာရင်းကိုင်များ webmaster, ဒီဇိုင်နာများ, etc) လက်တွေ့မဖြစ်နိုင်ကိုဤထောက်ခံချက်အကောင်အထည်ဖေါ်ရန်။ သူတို့တစ်တွေ 1-နာရီစေရန်အချိန်ရှိသည်လိမ့်မည်ဟုအခါပြုပြင်နေ့ကအနည်းဆုံး 8?!
ဤဆောင်းပါး၌သင်တို့ကိုငါပင်ပန်းနွမ်းနယ်ကိုရှောင်ကြဉ်ခြင်းနှင့်မျက်စိ strain ကိုလျှော့ချနိုင်ပါတယ်မည်သို့အချို့အကြံပြုချက်များရေးရန်ပါလိမ့်မယ်။ အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောရေးထားသမျှသောအားလုံးသည်ရုံကျနော့်အမြင် (ငါသည်ဤဧရိယာ၌ကျွမ်းကျင်သူတစ်ဘူး!) ။
သတိပေးခြင်း! ငါဆရာဝန်တစ်ဦးမဟုတ်ဘူး, ငါရိုးသားစွာတကယ်ကဒီဘာသာရပ်တခုတခုအပေါ်မှာဆောင်းပါး, ဒါပေမယ့်အဲဒီအကြောင်းရိုးရှင်းတဲ့မေးခွန်းအတော်လေးတွေအများကြီးရေးသားဖို့မကြိုက်ကြပါဘူး။ သငျသညျငါ့စကားကိုနားထောင်ခင်မှာသို့မဟုတ်မည်သူမဆိုကွန်ပျူတာမှာအလုပ်လုပ်တဲ့အခါသင်ကအရမ်းပင်ပန်းမျက်စိလျှင်ထိုသို့ခဲ့ - တစ်ဦးမျက်စိစမ်းသပ်အတူတိုင်ပင်သွားပါ။ ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်သငျသညျ, တစ်စက်သို့မဟုတ်အရာတစ်ခုခုကိုမှတ်မှတ်ပုံတင်ရန်ပါလိမ့်မယ် ...
ကျနော့်အမြင်ခုနှစ်တွင် (နှင့်ဟုတ်တယ်ငါအသိပေးစာပိုင်ဆိုင်) လူများစွာဖြင့်အကြီးမားဆုံးအမှားဟာ PC ကိုမှာအလုပ်လုပ်တဲ့အခါမှာသူတို့ကိုချိုးဖျက်မကြောင်း။ ဒီနေရာတွင်ဥပမာ, သင်သည်မည်သည့်ပြဿနာကိုဖြေရှင်းဖို့လိုအပ်ပါတယ် - ကဖြေရှင်းနိုင်ပါတယ်သည်အထိလူတွေသူမကို 2-3-4 နာရီထိုင်လိမ့်မည်။ သာထို့နောက်ဒါပေါ်မှာနေ့လည်စာသို့မဟုတ်လက်ဖက်ရည်ချိုးဘို့အသွားနှင့်အ။
ဒါကြောင့်သင်မပွုနိုငျသညျ! အရာတစ်ခုမှာသင်, ရုပ်ရှင်ကြည့်ရှုအပန်းဖြေခြင်းနှင့် 3-5 မီတာကွာတီဗီ (မော်နီတာ) ကနေအိပ်ရာပေါ်မှာထိုင်။ အဆိုပါမျက်စိ, တင်းမာနေသော်လည်း, ဒါပေမယ့်သင် programming ကိုတစ်ခုခုရှိသည်သို့မဟုတ်ဒေတာကိုဖတ်လျှင်အဖြစ်, Excel ကိုအတွက်ပုံသေနည်းမဝင်နိုင်ဖြစ်ပါတယ်။ ဤကိစ္စတွင်ခုနှစ်, မျက်စိပေါ်တွင်ဝန်အကြိမ်ပေါင်းများစွာတိုးပွါး! ထို့ကြောင့်မျက်စိကိုပိုမိုလျင်မြန်စွာသောအခါမှစတင်။
ဟုတ်ကဲ့ရုံတစ်ကြိမ် 40-60 မိနစ်။ ကွန်ပျူတာမှာအလုပ်လုပ်ရသောအခါ, သင် 10-15 မိနစ်ခန့်စောင့်ဆိုင်းသင့်ပါတယ်။ (အနည်းဆုံး 5!) ။ ဆိုလိုသည်မှာ 40 မိနစ်ကိုယူပြတင်းပေါက်ထဲကကြည့်ရှု, တူ, ထ - ။ 10 မိနစ်ကျော်သွားပြီ, ပြီးတော့အလုပ်လုပ်သွား .. ဒီ mode ကိုနှင့်အတူ, သင်၏မျက်စိသိပ်ပင်ပန်းမရှိကြပေ။
ငါသည်သင်တို့ကိုအလုပ်လုပ်ခြင်းနှင့်အရာတစ်ခုခုအတွက်စိတ်ဝင်စားနေသည့်အခါ, အချိန်ခြေရာခံစောင့်ရှောက်သို့မဟုတ်ပါကအတိအကျရှာရန်နားလည် - အစဉ်အမြဲအလုပ်မလုပ်ပါဘူး။ ယခုမူကားထိုကဲ့သို့သောတာဝန်များကိုများအတွက်အစီအစဉ်များရာပေါင်းများစွာရှိပါတယ်: ကွဲပြားခြားနားသောနှိုးဆော်သံနာရီ, တိုင်မား, etc ငါအလွယ်ကူဆုံးတွေထဲကအကြံပြုနိုင်ပါတယ် - ။ EyeDefender.
Link ကို: //www.softportal.com/software-7603-eyedefender.html
မျက်နှာပြင်ချွေတာဖော်ပြရန်အချိန်အပိုင်းအခြားအချို့ကာလပြီးနောက် - Windows ကိုအားလုံးဗားရှင်း, သောဗိုလ်မှူးရည်ရွယ်ချက်အတွက်အလုပ်လုပ်တယ်သောအခမဲ့ပရိုဂရမ်ဖြစ်ပါတယ်။ ကြားကာလကို manually သတ်မှတ်အချိန်ငါ 45min. -60min အတွက်တန်ဖိုးထားရန်အကြံပြုပါသည်။ (သင်ကြိုက်တတ်တဲ့အမျှ) ။ ဘယ်အချိန်မှာဒီအချိန်လွန်သွားပါလိမ့်မယ် - အစီအစဉ်ကိုသင်သမျှလျှောက်လွှာထဲမှာ "ပန်းပွင့်" ပြသပေးပါတယ်။ ယေဘုယျခုနှစ်, utility ကိုအလွန်ရိုးရှင်းတဲ့နှင့်ပင်အတွေ့အကြုံမရှိသေးသောအသုံးပြုသူများအတွက်ခက်ခဲလိမ့်မည်မဟုတ်ပေနားလည်ပါတယ်။
အလုပ်ကြားကာလအကြားကြွင်းသောအရာ၏ထိုကဲ့သို့သောကြားကာလလုပ်နေတာ - သင်သည်သင်၏မျက်စိအပန်းဖြေခြင်းနှင့်ဝေးရကူညီဖို့ (နှင့်သာသူတို့ကို) ။ ယေဘုယျအားဖြင့်တစ်နေရာတည်းတွင်အချိန်ကြာမြင့်စွာထိုင်သည်အခြားကိုယ်တွင်းအင်္ဂါအပေါ်အပြုသဘောအကျိုးသက်ရောက်မှုမဟုတ်ပါဘူး ...
ဤတွင်, လမ်းဖြင့်, သင်တဦးတည်းဗီဇဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့လိုအပ်ပါတယ် - အချိန်ကိုကျော်ကြောင်းအချက်ပြခြင်း, "screensaver" လုပ်ခဲ့တယ်ဘယ်လို - သင်ပြုသမျှ, (data တွေကိုကယ်တင်ပြီးချိုးယူ, ဆိုလိုသည်မှာ) အလုပ်လုပ်နေရပ်တန့်။ ပထမဦးဆုံးမှာအတော်များများလုပ်, အဲဒီနောက်မိတ်ဆက်ခြင်းကိုရန်အသုံးပြုရနှင့်ဆက်လက်လုပ်ကိုင်ဖို့စဉ်ကပိတ်ပါ။
ဘယ်လိုဒီခေတ္တနား 10-15min အတွက်သင်၏မျက်စိအနားယူရန်။ :
ဒါဟာထွက်သွားပါဒါမှမဟုတ် window ကိုသွားပြီးအကွာအဝေးသို့ကြည့်ဖို့အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ ထို့နောက် 20-30 စက္ကန့်အကြာတွင်။ တစ်ဦးကိုပြတင်းပေါက်၌အချို့သောပန်းပွင့်မှာကြည့်ဘာသာပြန်ဆို (သို့မဟုတ်ဒီတော့ထွက် box ကိုအပေါ်ဟောင်းလမ်းကြောင်းအချို့တစ်စက်နှင့်ပေါ်မှာ။ ), ကောင်းစွာသောဖြစ်ပါသည်, ဝက်တစ်မီတာအတွင်း။ ထို့နောက်တဖန်အကွာအဝေးသို့ကြည့်ရှုခြင်းနှင့်ဒါအကြိမ်ပေါင်းများစွာ။ သငျသညျအကွာအဝေးသို့ကြည့်ရှုသောအခါ, သစ်ပင်သို့မဟုတ်မည်မျှလမ်းပေါ်မှာတစ်လွှားအင်တာနာပေါ်မှာအကိုင်းအခက်များ၏အရေအတွက်ကိုရေတွက်ဖို့ကြိုးစား (သို့မဟုတ်ကဲ့သို့သောအရာတစ်ခုခု ... ) ။ လမ်းအလားတူလေ့ကျင့်ခန်းကောင်းကောင်းလေ့ကျင့်သင်ကြားမျက်စိကြွက်သားအသုံးပြုပုံအများအပြားပင်မျက်မှန်တွေကိုဖယ်ရှားဖို့တယ်;
မကြာခဏ (သင်ကသင်၏ PC ကိုထိုင်နေသည်နေတဲ့အခါမှာဒီကိုလည်းအချိန်သက်ဆိုင်) မျက်တောင်ခတ်။ သငျသညျမျက်တောင်ခတ်လိုက်တဲ့အခါ - ထို့နောက်မျက်နှာပြင် (ဖြစ်ကောင်းမကြာခဏ "ခြောက်သွေ့တဲ့မျက်စိ syndrome ရောဂါ" အကွောငျးကိုကွား) မျက်စိစိုစွတ်ကြ၏လျက်ရှိ၏
သူတို့ပိတ်ထားတဲ့မျက်စိနှင့်ဖွဲ့နိုင်ပါသည်သကဲ့သို့, (ဆိုလိုသညျကိုဆင်း, left, ညာ, ထကြည့်ရှု) မြို့ပတ်ရထားမျက်စိလှုပ်ရှားမှုများကိုမ စ. ,
စကားမစပ်ကြောင့်လည်းတက်ကြွပေးနှင့်အထွေထွေအတွက်ပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှုကိုလျှော့ချရန်ကူညီပေးသည်, ထိုအလွယ်ကူဆုံးနည်းလမ်း - နွေးရေနှင့်သင်၏မျက်နှာကိုဆေးကြောဖို့;
ပေါက်အကြံပြုသို့မဟုတ်အထူး။ မျက်မှန် (မျက်မှန် "တွင်း" နဲ့သို့မဟုတ်အထူးဖန်အတူတက်အဲဒီမှာကြော်ငြာတွေရှိသည်။ ) - ငါမသွားဘူး။ ကိုယ်တော်တိုင်ငါကိုသုံးပါ, သူတို့ကသင်၏တုံ့ပြန်မှုကိုစဉ်းစားနှင့် (ကောင်းစွာ, ဥပမာတစ်ခုတည့်မှုလည်းမရှိ) ပင်ပန်းနွမ်းနယ်စေမည်သူတစ်ဦးအထူးကုသင့်အကြံပြုကြဘူးရိုးသားဖို့, ထို။
ရုံဒီတော့ထွက်ရောင်ခြည်ဆန့်ကျင်ဘက်, resolution ကိုအာရုံစိုက်နှင့်။ သင့် Monitor ၏ခဏ။ သူတို့ကအကောင်းဆုံးတန်ဖိုးများပေါ်မှာရှိသမျှရှိပါသလား အရောင်အထူးအာရုံစိုက်: အမော်နီတာလည်းတောက်ပပါလျှင် - မျက်စိကိုအလွန်လျင်မြန်စွာသောအခါမှစတင်။
သင်တစ်ဦး CRT မော်နီတာရှိပါက (ဒါဟာအထူ, ထိုကဲ့သို့သောကြီးမားတဲ့ပါပဲ။ ဒါကြောင့်ယခုသတ်သတ်မှတ်မှတ်လုပ်ငန်းများကိုအတွက်အသုံးပြုသည်ပေမယ့်လူကြိုက်များတဲ့, 10-15 လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းရှိခဲ့သည်) - ထို Refresh Rate ကိုအာရုံစိုက် (IE, ဘယ်လောက်အကြိမ်ပေါင်းများစွာတစ်စက္ကန့် image ကိုပြက်ခနဲ)။ မည်သည့်ကိစ္စတွင်ခုနှစ်, frequency ကို 85 Hz ထက်နိမ့်မဖြစ်သင့်ပါတယ်။ , ဒီလိုမှမဟုတ်ရင်မကျြစိ (ကအဖြူရောင်နောက်ခံလည်းမရှိ, အထူးသဖြင့်လျှင်) စဉ်ဆက်မပြတ်တုန်ခါမှုတွေကနေအလျင်အမြန်ယာမှစတင်။
ဂန္ထဝင် CRT မော်နီတာ
frequency မောင်း, လမ်းဖြင့်, သင်သည် (သင့်ဂရပ်ဖစ်ကဒ်ဒရိုင်ဘာ၏အပြင်အဆင်များတွေ့နိုင်ပါသည်တစ်ခါတစ်ရံ Refresh Rate ကိုခေါ်တော်မူ).
အဆိုပါမော်နီတာတက် setting အပေါ်ဆောင်းပါးတစ်ဦးကစုံတွဲ:
မျက်နှာပြင် resolution ကိုပြောင်းလဲနေတဲ့အကြောင်း:
ငါအကြံပေးချင်တယ်နောက်ဆုံးအရာ။ အားလပ်ချိန် - ဤဆက်ဆက်ကောင်းလှ၏။ ဒါပေမယ့်အနည်းဆုံးတစ်ကြိမ်တစ်ရက်စာမစားမှီတစ်ပါတ်, ကျေနပ်မှု - သည်, တနေ့လုံးဒါမှမဟုတ်ကွန်ပျူတာမှာထိုင်။ တိုင်းပြည်တစ်ခရီးစဉ်ကို ယူ. သင်၏မိတ်ဆွေများကိုသွား, အိမျတျော၌အမိန့်နေရာ, etc
ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ဤဆောင်းပါးကိုတစ်စုံတစ်ဦးကရှုပ်ထွေးမှုများဟန်နှင့်မဟာအလွန်ယုတ္တိနှင့်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတစ်စုံတစ်ဦးကကူညီလိမ့်မည်။ အနည်းဆုံးအားတစ်စုံတစ်ဦးကထိုသို့အသုံးဝင်သောဖြစ်လိမ့်မည်ဆိုပါကကျွန်မပျော်ရွှင်ကြလိမ့်မည်။ အားလုံးကိုအကောင်းဆုံး!